China Garlic Planter ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | RY AGRI
Enwere ike iji igwe galik a mee ihe n'ọtụtụ ala na ugwu iji ghọta usoro ịkpụ galik galik n'ọtụtụ. Site na ngbanwe nke isi galik, ọ nwere ike ịghọta ebe a na-akụ mkpụrụ osisi.
Nkọwapụta Mpempe akwụkwọ
Obosara na-arụ ọrụ
Ahịrị dị iche iche
3-ka akara aka
1. Nhazi zuru oke na nke ezi uche dị na igwe dum na-ahụ na usoro ọrụ ahụ kwụsiri ike, tụkwasịrị obi ma rụọ ọrụ nke ọma.
2. A na-edozi ntuziaka galik ngwa ngwa iji hụ na ọnụego lanarị nke akuku.
3. Na-aga n’ihu n’ụzọ ziri ezi, hụrụ mkpụrụ osisi nke ọma iji hụ na akuku, ohere na ịgha mkpụrụ.
4. Njupụta nke akuku na ịdị n'otu nke ịgha mkpụrụ.
5. Iji okpukpu anọ na-eji traktọ ike, ụgwọ dị ala, usoro dị mfe, arụmọrụ dị mfe
Ntinye nke onye na-agha osisi na traktọ: jikọọ nkwado nkwusioru ala nke onye na-akụ osisi na mkpanaka nkwudo ala nke traktọ ahụ, jikọọ nkwado nkwusioru nke elu ya na mkpanaka nkwanye ugwu nke traktọ ahụ, ma na-eyi ntụtụ mkpọ na mkpọchi mkpọ mgbe njikọta. Gbanwee njikọ nkwusioru nke etiti. Eyi pin aro na mkpọchi pin mgbe njikọ. Gbanwee mkpanaka nke etiti nke etiti nkwusioru, mee onye na-akụ ihe na ọkwa tupu na mgbe; mezie hydraulic nkwusioru aka ekpe na aka nri na-agbanwe mkpara, mee etiti ahụ aka ekpe na aka nri na ọkwa; hụ na nkwụnyefe nnyefe na ntụkwasị obi mgbe onye na-akụ osisi na-arụ ọrụ.
1. Nlekọta tupu ịbanye n'ọhịa, anyị kwesịrị ihicha sundries na seeding box na ahịhịa na ala na trenchi opener iji hụ na ọnọdụ dị mma, ma tinye mmanụ mmanu na nnyefe na adiana akụkụ nke traktọ na onye na-akụ ihe dịka ihe achọrọ nke ntuziaka ahụ.
2.Eku enweghị ike ikwanye, mgbe onye na-akụ ya na traktọ kwụ ọtọ, egbulala ya, ọrụ kwesịrị ime ka etiti ahụ na mgbe ọ gachara.
3. A ga-eme ụdị nhazi ọ bụla dị ka nkọwa na agronomic chọrọ, ọnụ ọgụgụ nke ịgha mkpụrụ, oghere ahịrị nke olulu mmiri ahụ, omimi nke nhazi mmiri ahụ kwesịrị ekwesị.
4. Lezienụ anya na mgbakwunye nke mkpụrụ, gbakwunye mkpụrụ n'ime igbe mkpụrụ iji nweta obere, iche, iji hụ na mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ ka dị irè; mkpụrụ ndị dị na igbe mkpụrụ n'oge ọrụ ahụ agaghị abụ ihe na-erughị 1/5 nke olu nke igbe mkpụrụ; iji hụ na ezigbo onye ihapu nke osisi.
Nke gara aga: Onye na-akpo Wheat
Osote: Sprayer aghụghọ